Akwụkwọ Camilla Läckberg niile dere Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ Camilla Läckberg dere
Na 2003, otu onye edemede na-eto eto si Sweden bipụtara akwụkwọ a kpọrọ The Ice Princess nke ga-emesị bụrụ onye na-ere ahịa kacha mma. Afọ iri na isii mgbe nke ahụ gasịrị, Camilla Läckberg abụrụla akara maka Akwụkwọ ozi Nordic na akwụkwọ nyocha, ịbụ obodo ya, Ọkụ azụ, bụ ebe epicent nke akụkọ niile na-eme ka onye uwe ojii Patrik Hedström na onye edemede Erica Falck. Anyị na-ewebata gị akwụkwọ niile Camilla Läckberg dere, bụ ndị rere ihe karịrị nde 25 gburugburu ụwa.
1 Akwụkwọ Camilla Läckberg dere
1.1 Adaeze ice
1.2 Mkpu ákwá nke oge gara aga
1.3 Mụ ndị oyi na-atụ
1.4 Ndụ mpụ
1.5 Footkwụ nzọ ụkwụ a na-agaghị ehichapụ
1.6 Onyunyo nke siren
1.7 Ndị na-ele ọkụ ọkụ
1.8 Ele ndị mmụọ ozi anya
1.9 Ọdụm tamer
Nwa eze Ice: ...
E bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ Läckberg na 2003 ịghọ nọmba 1 na Sweden ma sụgharịa ya ma bipụta ya na Spen n’afọ 2006. Otu n’ime akwụkwọ ndị ode akwụkwọ dere nke ọma mere ka obodo Fjällbacka dị omimi site n’igbu onwe ya Alexandra, nwa agbọghọ nke onye mụrụ ya bụ nwata, onye edemede Erica Falck, gwara ndị mụrụ ya n’oge na-adịbeghị anya. nwụrụ anwụ nke bụ n'ezie igbu ọchụ Ya na onye uwe ojii Patrik Hedström ọ ga-agba mbọ idozi okwu ahụ.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Adaeze ice?
Mkpu ákwá nke oge gara aga
Mkpu nke gara aga ...
E bipụtara na 2004, akwụkwọ akụkọ nke abụọ Läckberg chịkọtara isi okwu nke Ice Ice Princess, Erica Falck na Patrick Hedström, oge a ọnụ na ịtụ anya nwa. Ọnọdụ adịghị ike nke ghọrọ ihe nro mgbe di na nwunye ahụ kpebiri ibi oge ọkọchị n'obodo Fjällbacka, ebe nwata nwoke hụrụ ozu nwa agbọghọ yana nke ụmụ agbọghọ abụọ ọzọ furu efu ọnwa gara aga, na-eweta akụkọ ọhụrụ nke na-aga n'ihu otu atụmatụ ahụ na-eri ahụ nke ọrụ nke onye edemede Sweden ọ bụ ezie na n'oge a, akụkọ a na-agbakọ agbagọ na agbagọ.
Lee Mkpu ákwá nke oge gara aga.
Mụ ndị oyi na-atụ
Daughtersmụ ndị oyi na-atụ ...
Akụkọ Läckberg na-etinye aka, na-adọta onye na-agụ ya na tebụl ha ma na-eme ka ha soro ya ọchụchọ maka ogbu mmadụ nke anyị chọrọ ịchọpụta n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla. Ihe ndi gbanwere oru ode akwukwo a na nko maka ndi huru ya n'anya akwụkwọ nyochaịbụ Mụ ndị oyi na-atụ ọzọ aha isi ya, oge a bipụtara na Sweden na 2005 na Spain afọ anọ ka e mesịrị. N'ime ughtersmụ nwanyị nke oyi, ndị na-akwado ya bụ ndị nne na nna, dabara na ọdịdị nke ozu Sara, ada nke enyi Erica onye mmiri riri tupu atụba ya na ala nke oke osimiri.
Ndụ Mpụ: A ...
N'ụbọchị tupu agbamakwụkwọ nke Erica na Patrick, otu di na nwunye kwụsiri ike nke nwa ha nwanyị, bụ Maja, dị ọnwa asatọ, onye isi obodo Fjällbacka na-ekwuwapụta mbata nke ndị ọrụ telivishọn ga-ese ihe nkiri bụ eziokwu "Fucking Tanum", nke yiri Gran Nwanna . Ọ bụ ezie na nnwale a na-ekwe nkwa iweta ọtụtụ elele na ndị bi na ya, oge ịse ahụ ghọrọ ọkụ mgbe otu n'ime ndị otu ihe omume a yiri ka egburu ya, na-adọta Patrick ka ọ nyochaa ikpe ahụ ma na-atụ egwu maka ndụ obere nwa ya nwanyị.
Yougụbeghị Ndụ mpụ?
Footkwụ nzọ ụkwụ a na-agaghị ehichapụ
Ihe a na-agaghị echefu echefu: ...
Mgbe ngwụsị oge oge ọkọchị, onye edemede Erica laghachiri n'ọrụ ya ebe onye ọlụlụ ya, bụ Patrick, nọ na-elekọta nwa ha nwanyị bụ Maja ruo nwa oge. Ọnọdụ kwụsiri ike ọzọ mgbe ozu Erik Frankel, ọkọ akụkọ ihe mere ama ama nke Agha Worldwa nke Abụọ pụtara na mpaghara Fjällbacka.
Lee Footkwụ nzọ ụkwụ a na-agaghị ehichapụ.
Onyunyo nke siren
Onyinyo nke siren: ...
E bipụtara na Sweden na 2008, Onyunyo nke siren na-agụ dị ka protagonist na Fjällbacka Librarian Christian Thydell, bụ onye e mesoro njigbu mgbe emesịrị mbipụta akwụkwọ mbụ ya, La sombra de la sirena. Otu akụkọ ihe omimi dị omimi nke nwere ezinụlọ na-adịghị mma nke na-akatọ enyi ya Magnus ịnwụ n'okpuru ice, mepee okwu ọhụrụ nke Erica na Patrik ga-enyocha.
Ndị na-ele ọkụ ọkụ
Ndị na-ere ọkụ ọkụ ...
Ihe paranormal anaghị akọ akụkọ akụkọ omimi Läckberg, ịbụ Ndị na-ele ọkụ ọkụ otu n'ime nke kasị elu karịrị nke mmadụ. N’akwụkwọ ahụ, e mere ka anyị mata Erica ugbua dị ime ejima yana obere oge iji leta Annie, enyi nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke kpebiri ịlaghachi Fjällbacka. Nkata ahụ malitere inwe mgbagwoju anya mgbe ezinụlọ ahụ bịara ọhụrụ kpebiri ịkwaga n'àgwàetiti Graskar, nke ndị mmụọ ochie biri, mmụọ nke enyi nwanyị mbụ ya, bụ Matte, ebe ọ bụ naanị Annie nwere ike ịhụ mgbe ọ pụtara na e gburu ya.
Ele ndị mmụọ ozi anya
Anya Ndi Mmụọ Ozi ...
N'ime akwụkwọ ọhụrụ a ọ bụ agwaetiti ọzọ, Valö, bụ ebe dị n'etiti ihe omimi niile nke atụmatụ ọhụrụ ahụ. Otu ebe di na nwunye nke Ebba na Mårten guzobere kpebiri ka ha kwaga mgbe nwatakiri nwa ha nwoke nwụsịrị, onye ndi ezin’ulo Ebba lara n’iyi n’ime afo ato gara aga n’ihi oku n’enweghi nkowa ma obu nyocha. Ebba, onye gbara otu afọ mgbe achọtara ya, gara n’ihu n’enweta ọsịsi ncheta ụbọchị ọmụmụ site n’aka onye ozi dị omimi nke Patrik na Erica bidoro nyocha ya.
Echefula Ele ndị mmụọ ozi anya.
Ọdụm tamer ...
N'etiti ọnwa Jenụwarị, nke kacha oyi na Fjälbacka, nwa agbọghọ gba ọtọ na-akwụsị n'etiti ụzọ ebe ụgbọ ala kụrụ ya. Mgbe emechara ahụ ahụ, achọpụtara na onye ahụ nwụrụ n'anya ọnwa anọ gara aga na, na-ekpe ikpe site na ọtụtụ ọnya na mmerụ ahụ ọ na-eyi, onye gburu onye amaghị onye gburu ya. Okwu a, nke Patrik nyochara, dị ka ihe sochiri usoro ihe nkiri ezinụlọ nke nwunye ya Erica mere.
Lee Ọdụm tamer.
Mmegwara nke Fairy: 1...
Akwụkwọ akụkọ Läckberg kachasị ọhụrụ E bipụtara ya na Machị 1 na mba anyị site na ụlọ obibi akwụkwọ Maeva ma na-ewere ọnọdụ ọzọ na mpaghara Fjälbacka. Na akụkọ ọhụrụ a, onye edemede ahụ na-emikpu onwe ya na ịchụ nta amoosu nke na-aga n'ihu na narị afọ nke XNUMX na nke na-apụta ọzọ mgbe ọdịdị nke ozu nwatakịrị nwanyị dị afọ anọ pụtara. Ọnọdụ mpụ yiri nke ahụ mere afọ iri atọ gara aga, mgbe a na-ebo ndị na-eto eto abụọ ebubo igbu ọchụ ọbụlagodi na enweghị ike ịtụ ha mkpọrọ maka ịbụ ndị pere mpe, na-apụta ọzọ mgbe ogbugbu ọhụrụ a Erica na Patrik mere nyocha.
Yougụbeghị Onye ojoo site Camilla Läckberg?
Ọ ga - amasị gị ịgụ akwụkwọ niile Camilla Läckberg na ndị nwanyị ojii ojii rafuru?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akwụkwọ Camilla Läckberg dere
Leralọ ahịa akwụkwọ Llera Pacios dijo
Ndị Sweden nwere onyinye okike maka akwụkwọ akụkọ nyocha, n'ezie ezigbo nkwanye.
Zaghachi na leralọ ahịa Llera Pacios
Ahụrụ m akwụkwọ ya n'anya, ọkacha mmasị m onye edemede ...
Agụọla m akwụkwọ Camilla niile; nke kacha ruo m n’obi bụ: Ebum n’Agwụ. Ekele dịrị onye edemede dị otú ahụ magburu onwe ya, onye na-eme ka anyị chịa ọchị, kwaa ákwá ma ghara ichefu oge gara aga.
Zaghachi Genina Glenda Giliberto
4 nchịkọta akụkọ maka ọnwa nke anọ nke afọ